पर्याप्त एजेन्सीहरूले संभावनाहरूलाई हिड्ने कुरा बताउँदैन | Martech Zone
शनिबार, डिसेम्बर 3, 2016 शनिबार, डिसेम्बर 3, 2016 Douglas Karr
हाम्रो एजेन्सी7बर्ष पहिले शुरू गर्नुमा मेरो आश्चर्यको एउटा कारण यो हो कि मैले एजेन्सी उद्योग सेवाहरूको मूल्य भन्दा पनि सम्बन्धमा बढी बनाएको छु। म यहाँसम्म भन्न को लागी जानुहुन्छ यो पनि धेरै हदसम्म सम्बन्ध को फाइदा मा आकस्मिक छ।
के तपाइँको ग्राहकले तपाइँलाई विश्वास गर्‍यो र तपाइँ उनीहरूसँग वर्षौंदेखि काम गर्दै हुनुहुन्छ? ठिक छ, त्यसले रेफरलहरू र निरन्तर स्वस्थ सम्बन्धको लागि नेतृत्व गर्दछ। के तपाईंले आफ्नो ग्राहकलाई आश्चर्यको साथ दर्साउनुभएको छ, जस्तै नयाँ टेक्नोलोजी र अर्को ठूलो सम्मेलनको लागि टिकटहरू? तपाईं आश्चर्यचकित हुनुहुनेछ कति ग्राहकहरूले तपाईंलाई पनि प्राप्त गर्नेछन्।
के तपाइँ तपाइँको ग्राहक प्रदान गरीएको छ मूल्य? यो दु: खी छ कि त्यसले वास्तवमा अरूले गरेको प्रभाव पाउँदैन। हामीले सँधै कसरी हाम्रो ग्राहकलाई अगाडि बढ्यौं र हाम्रा ग्राहकहरूलाई अगाडि बढ्यौं भन्नेमा आधारित रहेर हामीले हाम्रो कामलाई सँधै गर्व गर्‍यौं। उनीहरूले केहि पनि गरेनन् भनी जान्न हामी छक्क पर्दछौं।
धेरै बर्षहरूमा, हामी ग्राहकहरू लिने क्रममा हामी अझ धेरै गर्छौं लगनशीलताको कारण तिनीहरू हाम्रो लागि राम्रो ग्राहक हुनुहुन्छ भनेर निश्चित गर्न तिनीहरू यति जाँच गर्दैछन् कि हामी उनीहरूका लागि सही ग्राहक हो कि होइनन्। कहिलेकाँही सम्भावनाहरू अगाडि बढ्न चाहन्छन् र हामी पछाडि धकेल्‍यौं वा टाढा हिंड्यौं। कहिलेकाँही व्यवसायले हामी पहिले नै परिवर्तन नेतृत्वको साथ काम गरिरहेका छौं र हामीले पछि धकेल्‍यौं वा टाढा हिंड्यौं।
जब हामी एउटा ठूलो ग्राहक छोड्छौं, तिनीहरूका नयाँ निर्देशकले चेतावनी दिए, "तपाईंले आफ्ना पुलहरू जलाउनु हुँदैन।" मैले उनलाई भने कि हामी पक्कै पनि त्यसो गर्न खोजिरहेका छैनौं तर उनले विकसित गरेको रणनीति त्यागेर एउटा ठूलो त्रुटि गरिरहेको थियो। यो सफलतापूर्वक वर्ष मा धेरै पटक कम्पनी को अनलाइन मांग बढेको थियो। उसले आफूलाई राम्रोसँग चिनेको छ कि स्नेर। त्यसैले मैले प्रतिक्रिया दिएँ कि उनले कम्पनी छोडे पछि हामी फर्कन्छौं। वर्षौंपछि र मलाई डर छ कि हामी नजिक छौं - कम्पनीले हामीले प्रदान गरेको सबै गति गुमाइसकेको छ… र त्यसपछि केही। मैले उहाँसँग मेरा पुलहरू जलाएको हुन सक्छ, तर म विश्वास गर्दछु कि हामी कम्पनीलाई छिट्टै नै मद्दत गर्नेछौं।
हालसालै, हामीसँग लक्जरी रिटेल आउटलेटले सहयोगका लागि हामीलाई सम्पर्क गर्‍यो। व्यवसाय स्वामित्व परिवर्तन हुँदै थियो र एक अविश्वसनीय नेटवर्क संग जीवन्त मालिक केहि प्रतिभाशाली युवा मालिकलाई व्यापार बेच्दै थियो। यद्यपि उहाँ अघि बढ्दै हुनुहुन्थ्यो, उहाँ आफ्नो विरासतको बारेमा चिन्तित हुनुहुन्थ्यो र नयाँ मालिकहरू सफल भएको कुरा सुनिश्चित गर्न चाहनुहुन्थ्यो। किनकि तिनीहरू अब भर पर्न सक्दैनन् आफ्नो नेटवर्क, उनले हामीलाई सम्पर्क गरे कि हामी जागरण बढाउन सक्छौं र अनलाइन माग गर्न सक्छौं कि भनेर।
अवश्य पनि, हामी सक्छौ। हामीले उनीहरूको वेब उपस्थिति साथ धेरै कम-ह्या hanging्गिंग मुद्दाहरू औंल्याए साथै उनको ईन्डस्ट्रीमा हालसालका चलनहरूमा पनि छलफल गर्यौं। जबकि उनी विश्वास गर्छन् कि उनीहरुको कम्पनीको स .्ख्या सुन्न होस्, हामीले ठूलो बृद्धि र विस्तार अनलाइन पाएका छौं। उसको स्थानीय खुद्रा आउटलेटमा राष्ट्रिय जानका लागि इन्भेन्टरी र स्केल थियो - ऊ आफ्नो डिजिटल नेटवर्कमा भर पर्न सक्ने भएकोले उसले त्यो डिजिटलमा कहिल्यै काम गरेन।
जब हामी बजेट र प्रस्तावको बारेमा छलफल गर्न नजिक भयौं, उनले आफ्नो बजेट थोरै छ भनेर पछाडि धकेल्न थाले। हामीले उसको सञ्जाल र यसको निर्माण गर्न बर्ष लागेका वर्षहरू छलफल ग्यौं। हामीले व्यापारलाई कायम राख्न र बढाउनको लागि हामीले उहाँसँग माग गरेको छलफल गरेका थियौं। उसले पछाडि धकेल्नुभयो कि उसलाई लाग्यो कि त्यसले पैसाको बर्बादी गरिरहेको हुन सक्छ, केवल उसले पहिले नै बनाएको एउटा साइटलाई बदल्दै कि त्यसले उसको व्यवसायलाई केही पनि सहयोग गरेको छैन। हामीले उनलाई रणनीतिहरू दोहोर्‍यायौं जुन हामी खटाउने छौं - कि यो केवल एक साइट मात्र थिएन, यो ब्रान्डि,, उत्पादन पदोन्नति, सामग्री, खोजी जागरूकता, ईकमर्स क्षमताहरू… थियो।
दुबै उदाहरणहरू कम्पनीहरू हुन् जसले अतुलनीय सम्भावना राख्दछन्। पहिलो, हामीले वास्तवमै सम्भाव्यतामा पुग्न र बढ्न सहयोग गरेका थियौं र यसले कम्पनीको तल्लो लाइनमा लाखौं डलरको परिणाम ल्यायो। र म तपाइँलाई आश्वस्त पार्न सक्छु कि हाम्रो राजस्व यसको एक अंश थियो। दोस्रोसँग लाखौं डलरको लागि सम्भाव्यता रहेको थियो, तर मालिकले यसलाई हामीले देख्न सकेनौं कि यसलाई हामीले कसरी व्याख्या गर्ने प्रयास गर्यौं। हुनसक्छ हामी केही फाइदाहरूको साथ प्रस्तावलाई ट्यून-ट्युन गर्न सक्थ्यौं… तर मलाई शंका छ कि यसले मद्दत गरेको भए हुने थियो। हामीलाई अझै पनि ग्राहकबाट खरिद गर्न र सुई सार्नको लागि पर्याप्त लगानी आवश्यक छ।
त्यसैले हामी हिंडे। र जब उनले हामीलाई फिर्ता आउन र थप छलफल गर्न आग्रह गरे, हामीले उनलाई बतायौं कि हामी अगाडि बढ्नु पर्छ। हामीसँग अवसरहरू र हाम्रो कामले अन्य ग्राहकहरूमा पार्ने प्रभावलाई चिनेका संभावनाहरू थिए।
के उसले डिजिटल रणनीति अपनाउनेछ? सम्भवतः ... उसले केही एजेन्सी भेट्टाउनेछ उसको लागि केहि काम गर्नका लागि। कोही जसले ओभरप्रोमाइज गर्छ, प्रोजेक्ट वा अभियान चलाउँछ, र त्यसपछि थोरै नगद र ग्राहकले राम्रो गर्दैन। म चाहन्छु एजेन्सीहरू यति भोकाएनन् र अधिकले सम्भाव्यतालाई बताउनेछन् हिंड्नुहोस्। वर्षौं पहिले मैले यो भनेको थिइनँ।
वर्षौं पहिले मैले यो भनेको थिइनँ। मैले भनेको थिएँ कि यो हाम्रो कार्य हो हाम्रो सम्भावना र ग्राहकहरूलाई सिकाउनु। यदि उनीहरूले मूल्य र लगानीलाई चिन्न सकेनन भने, यो हाम्रो गल्ती थियो। तर अब होइन ... यदि सम्भावना वा ग्राहकहरूले संसार परिवर्तन भएको देख्न सक्दैनन् भने कि उनीहरूका प्रतिस्पर्धीहरू अनलाइन खाजा खाइरहेका छन्, र उनीहरूले आफ्नो बजारका प्रयासहरूमा सकल राजस्वको एक प्रतिशत प्रतिशत लगानीमा गम्भीर हुनु आवश्यक छ, मँ। ' मँ अब यसलाई व्याख्या गर्न को लागी मेरो समय बर्बाद गर्ने छैन।
मैले एक हप्ता वा अघिल्लो भन्दा बढी गर्‍यो बजार समस्याको एक हिस्सा थिए, प्राय हास्यास्पद कम लागतको साथ विशाल अपेक्षा राख्ने। नतिजाको रूपमा, ग्राहक कहिल्यै सफल हुँदैनन् र, सेवाहरूको लागत जुन उनीहरूले तिर्दछन् काम गर्दैनन्, उनीहरू अझ बढी लगानी गर्न हिचकिचाउँछन्। यदि सबैले कुरा गरिरहेका छन् कि यो चीज कत्तिको सजिलो छ (जब यो हुँदैन), हामीसंग एक उद्योगको समस्या पनि छ।
तिम्रो के बिचार छ? म मेरो प्रतिक्रिया मा अकाल छ? हुनसक्छ मैले यो धेरै लामो समयदेखि गरिरहेको छु र म केवल एउटा मूर्ख बानी भइरहेको छु।
टैग: एजेन्सीएजेन्सी लगानीलागतग्राहकहरु फायर गर्दैफायरिंग संभावनाहरुमार्केटिंग एजेन्सी लागतमार्केटिङ रणनीतिलगानी फिर्तारयमूल्य